बामदेवको एकता अभियानमा ओली सहमत, दाहाल नेपाल पक्ष आउला ? « Ok Janata Newsportal
बामदेवको एकता अभियानमा ओली सहमत, दाहाल नेपाल पक्ष आउला ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले चालेको एकता अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । सरकार सञ्चालनमा सहज नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा हुमिएका ओलीले नेता बामदेव गौतमको अभियानलाई साथ दिने बुभिएको छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एकता अभियानमा पनि उपाध्यक्ष गौतमले ओली र दाहाललाई मिलाएरै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । गौतमले दुवैजनालाई मिलाउन सक्ने सामथ्र्य आफूमा भएको बताए । अहिले दुई कित्तामा विभाजित नेकपाले निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाँदा हार व्यहोर्नुपर्ने अनुमान लगाइसकेको छ ।
वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन तोकिएको भएपनि पुनः एकताको अभियान थालनी भएपछि निर्वाचन धकेलिने पक्का छ । त्यसै पनि विवाद नमिल्दा निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने नेकपाका एक नेताको भनाइ छ । निर्वाचनका सामाग्री समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने आयोगको समेत ठहर छ ।
यता, नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का नेताहरु पनि एकता अभियानलाई अगाडि बढाउन तयार छन् । यद्यपि एकता हुँदा पहिलेको भन्दा जटिल परिस्थिति कायम हुने नेताहरुको ठहर छ ।
नेकपा एसले एक मन्त्रीको नाम टुंग्यायो, उपप्रधानमन्त्रीमा खतिवडा